“ကဝါကာပို တောင်” | Climb O'Clock
← စာရာမေတိ တမ်းခြင်း
ဧဝရတ် အကြောင်း ဖတ်မိဖတ်ရာ →
“ကဝါကာပို တောင်” Mt. Kawakarpo
တရုပ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဒီကျင် ဒေသမှာ တည်ရှိတဲ့ ကဝါကာပို လို့အမည်ရတဲ့ တောင်ဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၆၇၄၀မီတာ အမြင့် ရှိပါတယ် ။ ပုံပြင် ဂမ္ဘီရ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ကြားဖူးနေကြဖြစ်တဲ့ ရှမ်ဂရီလာ လို့ အမည်ရတဲ့ တောင်တန်းကြီးမှာရှိတဲ့ “ကဝါကာပို တောင်” ဟာ တိဘက်လူမျိုးတွေရဲ့ ပူဇော်ပသ ရာ တောင်တွေထဲကမှ အဓိက ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တဲ့ တောင်မြင့်ကြီးတစ်လုံးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။ …
ယူနန်ပြည်နယ် ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်တဲ့ “ကဝါကာပို ရေခဲတောင်ထိပ်” ဟာ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှတက်ရောက် အောင်မြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ အပျိုစင် တောင်ထိပ် ( Virgin Summit ) လည်း ဖြစ်လို့နေပြန်ပါတယ်။ ” ကဝါကာပို ရေခဲတောင်ထိပ် ” ကို တက်ရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းမှူတွေရဲ့ တောင်တက်သမိုင်းထာ ၁၉ရာစု ကတည်းက ရှိခဲ့တာပါ ၊ ၁၉၀၂ ခုနှစ်ကစလို့ အင်္ဂလန်က တောင်တက်သမားတွေဟာ တောင်ကြီးကို အောင်မြင်ဖို့ရာ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ ပေမဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူး။
၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာတော့ တရုပ်-ဂျပန် ညွန့်ပေါင်း တောင်တက်အဖွဲ့ဟာ အပျိုစင် “ကဝါကာပို ရေခဲတောင်ထိပ် “ ကို တက်ရောက်ဖို့ထပ်မံကြိုးစားခဲ့ကြပြန်ပါတယ။ ထိုတောင်တက်အဖွဲ့ဟာ ကံဆိုးစွာနဲ့ တောင်ပေါ်က ရေခဲတွေ ရုတ်တရက်ပြိုဆင်းပိကျလာတာ(avalanche) နဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး အဖွဲ့ဝင်တောင်တက်သမား ၁၇ဦး ဟာ ရေခဲပိပြီး သေဆုံးခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ၇နှစ်အကြာ ၁၉၉၈ခုနှစ်မှာမှ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ ကြတာပါ။
ယခုအချိန်ထိလည်း ကဝါကာပို ရေခဲတောင်ထိပ်ဟာ ဘယ်တောင်တက်သမား မှတက်ရောက် နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့ ကမ္ဘာ့တောင်တွေစာရင်းမှာ အလွန်ရှားပါးတဲ့ Virgin Summit အပျိုစင် တောင်တစ်လုံးအနေနဲ့ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာ့မြောက်ဖျားမှာလည်း အလားတူ Virgin Summit မြောက်များစွာကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ (တစ်ချို့ မီတာ၅ထောင်ကျော်တောင်ထိပ်တွေဆို တောင်ရဲ့နာမည်တောင်မရှိပါဘူး)
Mt. Kawakarpo, in Deqin, Yunnan province, China, one of the most important pilgrimage sites to tibetans. At 6,740 meters above sea level, it is the tallest mountain in the entire Yunnan province and has never been scaled, despite numerous attempts since 1902 by experienced English. In 1991, 17 Chinese and Japanese mountaineers died there because ofasudden avalanche. Their bodies were found7years later. Kawakarpo is stillavirgin mountain now, very rare in today’s globle village age. It is the Photo description of original uploader Zhangning on 500px………….. Photo description and Information of Mt. Kawakarpo credit goes to original uploader Zhangning on 500px (you can view the original photo by link : http://500px.com/photo/59630642?utm_medium=twitter&utm_source=500px&utm_campaign=nativeshare&utm_content=web )
P.S : There are4Summit in northern Myanmar which stands from 1st to 4th on the List of Southeast Asian Mountains according to Wiki , the top4summits are in northern Myanmar, they are
Hkakaborazi (5,881m / 19,295 ft )
Ganlanrazi (5,834m/19,140 ft )
Dindawrazi (5,464m/17,927 ft)
Sheankalarazi (5,001m /16,404 ft )
Out of4Myanmar & SEAsia highest summit ,2were conquered by world’s strongest climbers (Hkakaborazi (FA) in 15 Sep 1996 by Takashi Ozaki & Nyima Gyalsten –Myanmar-Japan team ) & (Ganlanrazi (FA) recently in7Sep 2013 by Pyae Phyo Aung, Andy & Molly Tyson, Chris Nance, Mark Fisher & Eric Daft, Myanmar-American team )
Dindawrazi (5,464m/17,927 ft) & Sheankalarazi (5,001m /16,404 ft ) , the two summits are still remain asavirgin summit until now, some of the very rare mountains in today’s Mountaineering story and Adventurous thrill seekers.
(စာကြွင်း: မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အမြင့်ဆုံးသော တောင်ထိပ် ၄ခုရှိတဲ့ အနက်မှာမှ ခါကာဘိုရာဇီတောင် နဲ့ ဂမ်လမ်ရာဇီတောင်ထိပ် တို့ကို လူသားများခြေချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်)
ဒင်ဒေါ်ရာဇီတောင် ( ၅၄၆၄ မီတာ / ၁၇၉၂၇ပေ ) နဲ့
ရှိုအင်တလာဂါဇီ တောင် ( ၅၀၀၁ မီတာ / ၁၆၄၀၄ပေ ) တို့ဟာ ကမ္ဘာ့တောင်တွေစာရင်းမှာ အလွန်ရှားပါးတဲ့ အပျိုစင် တောင်ထိပ် နှစ်ခုအဖြစ်နဲ့ မြန်မာပြည်မြောက်ဖြားစွန်းဒေသမှာ ငွါးငွါးစွင့်စွင့် ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး တောင်တက်သမားတို့ရဲ့ ဇွဲနဲ့ လုံ့လဝရိရကို စိန်ခေါ်လျက်ရှိပါကြောင်း)
(ခါကာဘိုရာဇီတောင်ထိပ်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၅ရက်နေ့မှာ အိုဇာကီနဲ့ နမားဂျွန်ဆင် တို့က မြန်မာ ဂျပန် ချစ်ကြည် ရေးတောင်တက်အဖွဲ့အနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
( ဂမ်လမ်ရာဇီတောင်ထိပ်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ပြည့်ဖြိုးအောင် နဲ့ အမေရိကန်တောင်တက်သမား ၅ဦးတို့ က မြန်မာအမေရိကန် ချစ်ကြည် ရေးတောင်တက်အဖွဲ့အနေနဲ့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။)
စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက် လင့်ကလေးတွေမှာ Mt.Kawakapo တောင်နဲ့ပက်သက်တဲ့ လက်လှမ်းမှီသလောက် ခရီးစဉ်အသေးစိတ်တစ်ချို့ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Mountaineering, News and tagged China, Mt. Kawakarpo, Virgin Summit. Bookmark the permalink.
1 Response to “ကဝါကာပို တောင်”
Pingback: “ကဝါကာပို တောင်” | Nyi Nyi Aung Climberdoelone